သမ္မတဟောင်း Barack Obama ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လိုရှာလို့ ဘယ်မှာသုံးလိုက်ပါ့
3 Aug 2018 . 7:02 PM
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းကြီး Barack Obama ဟာ အလုပ်များလွန်းတဲ့သူပါ။ သမ္မတရာထူးက ထွက်သွားပြီဆိုပေမယ့် စာအုပ်ရေးတယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်တယ် ပြီးတော့ ဟောပြောပွဲတွေမှာလည်း ပါလိုက်သေးတယ်။ ၂ဝဝ၈ခုနှစ်တုန်းက သူ့ရဲ့အသားတင်ကြွယ်ဝမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်းပဲ ရှိခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ (၄ဝ) သန်းအထိ ကြွယ်ဝလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတမဖြစ်ခင်က ငွေကြေးပမာဏထက် အဆ (၃ဝ) ကျော် ကြွယ်ဝလာတဲ့သဘောပါ။
၂ဝဝ၅ခုနှစ်မှာ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီး သမ္မတလစာ၊ စာအုပ်ရောင်းရငွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက အမြတ်ငွေတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ဒေါ်လာသန်း (၂ဝ.၅) အထိရှိတယ်လို့ သိရပြန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Netflix ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ Talk Show အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ဒေါ်လာသန်းဂဏန်းလောက်ရခဲ့တယ်လို့ သိရပြန်ပါသေးတယ်။ သမ္မတဟောင်းဖြစ်တာကြောင့် ပင်စင်လစာဟာ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ (၂) သိန်းအထိ ရရှိနေပြီး ဟောပြောပွဲတွေကနေ ဒေါ်လာ (၄) သိန်းနီးပါးရတယ်လို့ ဆိုထားပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် သူရဲ့ “The Audacity of Hope” ၊ “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” နဲ့ “Dreams From My Father,” စာအုပ်တွေကနေ ဒေါ်လာ (၁၅.၆) သန်းလောက် ရခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါ်လာသန်း (၆ဝ) တန် စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါ်လာ သန်း (၄ဝ) ကြွယ်ဝတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပေမယ့် ဒီပမာဏထက်တောင် ပိုနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် Barack Obama အတွက်လည်း ငွေကုန်ပေါက်က မနည်းပါဘူး။ ၂ဝဝ၇ခုနှစ်တုန်းက သမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Malia နဲ့ Sasha တို့ရဲ့ ကျောင်းစရိတ်အတွက် Bright Directions မှာ ဒေါ်လာ (၁) သိန်းနီးပါး စုငွေထည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အိမ်ဖြူတော်က ဆင်းတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်လာ (၈.၁) သန်းတန်တဲ့ စံအိမ်ကြီးကို ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ၈,၂ဝဝ စတုရန်းပေ အကျယ်အဝန်းရှိပြီး ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ တည်ရှိတာပါ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒေါ်လာ (၂၃) သန်းတန်တဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးသူဌေးကြီး Jeff Bezos ရဲ့စံအိမ်ပြီးရင် Barack Obama ရဲ့အိမ်က ဈေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ချီကာဂိုမြို့မှာလည်း (၁.၆၅) သန်းတန် အိမ်တစ်လုံးကို ၂ဝဝ၅ခုနှစ်တုန်းက ဝယ်ထားပါသေးတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော ကာလတန်ကြေး (၂.၅) သန်းရှိနေပါပြီ။
အိမ်ဖြူတော်က ဆင်းခဲ့ပြီးနောက် Barack Obama တို့မိသားစုဟာ အပန်းဖြေထွက်တဲ့အချိန်က ပိုများပါသေးတယ်။ Richard Branson ကြီးပိုင်တဲ့ Necker Island ၊ The Brando Hotel ၊ Hawaii Island နဲ့ Bali Island တွေကို ခရီးဆက်ခဲ့သူပါ။
ကုန်ကျစရိတ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (General Services Administration) က ကျခံပေးရတယ်ဆိုတော့ ငွေကြေးပမာဏကို ဘယ်သူမှ မသိကြပေမယ့် ဒေါ်လာသန်းဂဏန်းလောက် ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
သမ္မတတစ်ယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ထဲမှာ အဝတ်အစားဖိုးမပါဝင်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပေမယ့် Barack Obama ကတော့ တန်ဖိုးကြီးတံဆိပ်တွေကိုသာ အကုန်အကျခံပြီး ဝတ်ဆင်ခဲ့သူပါ။
Barack Obama နဲ့စာရင် Michelle Obama က ကောင်းပေ့ညွန့်ပေ့ဆိုတဲ့ အရာတွေကိုမှ သုံးတတ်သူပါ။ သူမဟာ J. Crew ၊ Target နဲ့ Converse တို့လို တံဆိပ်တွေကိုသာ ဝတ်ဆင်ပြီး တစ်ထည်တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ (၁၂,ဝဝဝ) နီးပါးရှိသူပါ။ ပွဲတက်ရတဲ့အခါတွေမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးဟာ လိုက်ဖက်ညီအောင် ဝတ်ဆင်တတ်ပြီး မကြာသေးမီက Beyoncé and Jay-Z Show ပွဲကိုတောင် တက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Michelle Obama ဟာ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အကောင်းကြိုက်တတ်သူဖြစ်ပြီး Turkey Chili လိုဈေးကြီးတဲ့ဟင်းတွေကိုသာ မှာစားတတ်သူပါ။ တစ်ချိန်ကို (၃၆) ဒေါ်လာအထိ ပေးရတဲ့ SoulCycle Gym မှာ လေ့ကျင့်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မီလျံနာဇနီးမောင်နှံက ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ အားတက်သရော ပါဝင်ကြသူပါ။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၅ခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ (၁.၁) သန်းနီးပါး လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ Forbes ရဲ့ မှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
သူဟာ စစ်မှုထမ်းဟောင်းဂေဟာတွေ၊ မိဘမဲ့ဂေဟာတွေ၊ အာဖရိကန်အမေရိကန်ကိစ္စတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အများဆုံးလှူဒါန်းခဲ့တာပါ။ သူဟာ “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” စာအုပ်ရောင်းရငွေကို ဒဏ်ရာရ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရဲ့ သားသမီးတွေကို ပညာသင်ဆုပေးခဲ့တာပါ။
ပညာသင်ဆုစရိတ်ဟာ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က ၂ဝ၁၅ခုနှစ်အတွင်း (၃၉၂,ဝဝဝ) ဒေါ်လာအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ခုနှစ်မှာ သူဟာ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း (၃၄) ခုကို ဒေါ်လာ (၆၄,ဝဝဝ) အထိကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
Barack Obama ရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးကိစ္စကို ပြောပါဆိုရင် ၂ဝဝ၉ခုနှစ်မှာ Nobel Peace Prize ရတုန်းက ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ (၁.၄) သန်းကို ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကို အကုန်လှူဒါန်းလိုက်တာပါပဲ။
သမ်မတဟောငျး Barack Obama ပိုကျဆံတှေ ဘယျလိုရှာလို့ ဘယျမှာသုံးလိုကျပါ့
အမရေိကနျသမ်မတဟောငျးကွီး Barack Obama ဟာ အလုပျမြားလှနျးတဲ့သူပါ။ သမ်မတရာထူးက ထှကျသှားပွီဆိုပမေယျ့ စာအုပျရေးတယျ၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု လုပျတယျ ပွီးတော့ ဟောပွောပှဲတှမှောလညျး ပါလိုကျသေးတယျ။ ၂ဝဝ၈ခုနှဈတုနျးက သူ့ရဲ့အသားတငျကွှယျဝမှု အမရေိကနျဒျေါလာ ၁.၃ သနျးပဲ ရှိခဲ့ပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ (၄ဝ) သနျးအထိ ကွှယျဝလာပွီပဲဖွဈပါတယျ။ သမ်မတမဖွဈခငျက ငှကွေေးပမာဏထကျ အဆ (၃ဝ) ကြျော ကွှယျဝလာတဲ့သဘောပါ။
၂ဝဝ၅ခုနှဈမှာ လှတျတျောထဲကို ရောကျတဲ့အခြိနျကစပွီး သမ်မတလစာ၊ စာအုပျရောငျးရငှနေဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုက အမွတျငှတှေအေားလုံးပေါငျးလိုကျရငျ ဒျေါလာသနျး (၂ဝ.၅) အထိရှိတယျလို့ သိရပွနျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Netflix ရုပျသံလိုငျးနဲ့ Talk Show အတှကျ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့ပွီး ဒျေါလာသနျးဂဏနျးလောကျရခဲ့တယျလို့ သိရပွနျပါသေးတယျ။ သမ်မတဟောငျးဖွဈတာကွောငျ့ ပငျစငျလစာဟာ တဈနှဈ ဒျေါလာ (၂) သိနျးအထိ ရရှိနပွေီး ဟောပွောပှဲတှကေနေ ဒျေါလာ (၄) သိနျးနီးပါးရတယျလို့ ဆိုထားပါသေးတယျ။
ဒါ့အပွငျ သူရဲ့ “The Audacity of Hope” ၊ “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” နဲ့ “Dreams From My Father,” စာအုပျတှကေနေ ဒျေါလာ (၁၅.၆) သနျးလောကျ ရခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတုနျးက စာအုပျတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ဒျေါလာသနျး (၆ဝ) တနျ စာခြုပျခြုပျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒျေါလာ သနျး (၄ဝ) ကွှယျဝတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပမေယျ့ ဒီပမာဏထကျတောငျ ပိုနိုငျပါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ Barack Obama အတှကျလညျး ငှကေုနျပေါကျက မနညျးပါဘူး။ ၂ဝဝ၇ခုနှဈတုနျးက သမီးနှဈယောကျဖွဈတဲ့ Malia နဲ့ Sasha တို့ရဲ့ ကြောငျးစရိတျအတှကျ Bright Directions မှာ ဒျေါလာ (၁) သိနျးနီးပါး စုငှထေညျ့ခဲ့ပါသေးတယျ။ အိမျဖွူတျောက ဆငျးတဲ့အခြိနျမှာ ဒျေါလာ (၈.၁) သနျးတနျတဲ့ စံအိမျကွီးကို ဝယျခဲ့ပါတယျ။ ၈,၂ဝဝ စတုရနျးပေ အကယျြအဝနျးရှိပွီး ဝါရှငျတနျဒီစီမှာ တညျရှိတာပါ။
အဲဒီအခြိနျတုနျးက ဒျေါလာ (၂၃) သနျးတနျတဲ့ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးသူဌေးကွီး Jeff Bezos ရဲ့စံအိမျပွီးရငျ Barack Obama ရဲ့အိမျက ဈေးအကွီးဆုံးပါပဲ။ ဒါ့အပွငျ ခြီကာဂိုမွို့မှာလညျး (၁.၆၅) သနျးတနျ အိမျတဈလုံးကို ၂ဝဝ၅ခုနှဈတုနျးက ဝယျထားပါသေးတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော ကာလတနျကွေး (၂.၅) သနျးရှိနပေါပွီ။
အိမျဖွူတျောက ဆငျးခဲ့ပွီးနောကျ Barack Obama တို့မိသားစုဟာ အပနျးဖွထှေကျတဲ့အခြိနျက ပိုမြားပါသေးတယျ။ Richard Branson ကွီးပိုငျတဲ့ Necker Island ၊ The Brando Hotel ၊ Hawaii Island နဲ့ Bali Island တှကေို ခရီးဆကျခဲ့သူပါ။
ကုနျကစြရိတျကို အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန (General Services Administration) က ကခြံပေးရတယျဆိုတော့ ငှကွေေးပမာဏကို ဘယျသူမှ မသိကွပမေယျ့ ဒျေါလာသနျးဂဏနျးလောကျ ကုနျကမြယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
သမ်မတတဈယောကျရဲ့ရပိုငျခှငျ့ထဲမှာ အဝတျအစားဖိုးမပါဝငျဘူးဆိုတာ လူတိုငျးသိပမေယျ့ Barack Obama ကတော့ တနျဖိုးကွီးတံဆိပျတှကေိုသာ အကုနျအကခြံပွီး ဝတျဆငျခဲ့သူပါ။
Barack Obama နဲ့စာရငျ Michelle Obama က ကောငျးပညှေ့နျ့ပဆေို့တဲ့ အရာတှကေိုမှ သုံးတတျသူပါ။ သူမဟာ J. Crew ၊ Target နဲ့ Converse တို့လို တံဆိပျတှကေိုသာ ဝတျဆငျပွီး တဈထညျတနျဖိုးက ဒျေါလာ (၁၂,ဝဝဝ) နီးပါးရှိသူပါ။ ပှဲတကျရတဲ့အခါတှမှော လငျမယားနှဈယောကျစလုံးဟာ လိုကျဖကျညီအောငျ ဝတျဆငျတတျပွီး မကွာသေးမီက Beyoncé and Jay-Z Show ပှဲကိုတောငျ တကျခဲ့ပါသေးတယျ။
Michelle Obama ဟာ အစားအသောကျနဲ့ ပတျသကျလို့ အကောငျးကွိုကျတတျသူဖွဈပွီး Turkey Chili လိုဈေးကွီးတဲ့ဟငျးတှကေိုသာ မှာစားတတျသူပါ။ တဈခြိနျကို (၃၆) ဒျေါလာအထိ ပေးရတဲ့ SoulCycle Gym မှာ လကေ့ငျြ့နသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မီလြံနာဇနီးမောငျနှံက ပရဟိတလုပျငနျးတှမှောတော့ အားတကျသရော ပါဝငျကွသူပါ။ ၂ဝဝ၉ ခုနှဈမှ ၂ဝ၁၅ခုနှဈအတှငျး ဒျေါလာ (၁.၁) သနျးနီးပါး လှူဒါနျးခဲ့တယျလို့ Forbes ရဲ့ မှတျတမျးအရ သိရပါတယျ။
သူဟာ စဈမှုထမျးဟောငျးဂဟောတှေ၊ မိဘမဲ့ဂဟောတှေ၊ အာဖရိကနျအမရေိကနျကိစ်စတှနေဲ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော အမြားဆုံးလှူဒါနျးခဲ့တာပါ။ သူဟာ “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” စာအုပျရောငျးရငှကေို ဒဏျရာရ စဈမှုထမျးဟောငျးတှနေဲ့ ကဆြုံးသှားတဲ့ စဈမှုထမျးဟောငျးတှရေဲ့ သားသမီးတှကေို ပညာသငျဆုပေးခဲ့တာပါ။
ပညာသငျဆုစရိတျဟာ ၂ဝဝ၉ ခုနှဈက ၂ဝ၁၅ခုနှဈအတှငျး (၃၉၂,ဝဝဝ) ဒျေါလာအထိရှိခဲ့ပါတယျ။ ၂ဝ၁၅ခုနှဈမှာ သူဟာ ပရဟိတအဖှဲ့အစညျး (၃၄) ခုကို ဒျေါလာ (၆၄,ဝဝဝ) အထိကို လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
Barack Obama ရဲ့ ဂုဏျယူစရာအကောငျးဆုံးကိစ်စကို ပွောပါဆိုရငျ ၂ဝဝ၉ခုနှဈမှာ Nobel Peace Prize ရတုနျးက ဆုကွေးငှေ ဒျေါလာ (၁.၄) သနျးကို ပရဟိတအဖှဲ့အစညျးတှကေို အကုနျလှူဒါနျးလိုကျတာပါပဲ။